Buzzwords Suuq-geynta ka Mashable | Martech Zone
Dadka ku nool Mashable waxay isku keeneen sawirradan 30 maalmood oo ah Buzzwords Marketing. Sida nin aan istaagi karin suuq geynta, Had iyo jeer waan ku qanacsanahay markaan si fiican u eegno suuqgeynta BS. Daacad baan noqon doonaa, in kastoo, oo aan qirto inaan u maleynayo in muuqaalkan muuqaalku ka buuxi karo uun.
Shuruudaha sida suuq-galka agile, infographic iyo ciyaaraha ma aha buzzwords suuqgeynta, waa ereyo dhab ah oo suuq kasta u baahan yahay inuu si buuxda u fahmo. Dhibaatadayda ugu weyni waa ereyga Ku noqo on Investment lagu qoro sida erayga loogu dhawaaqo. ROI maahan eray sir ah… waa baahi lama huraan ah. Waxaan sii wadaynaa inaan aragno hay'adaha iyo ganacsiyada aan korjoogtada ka ahayn soo noqoshadooda maalgashiga oo fashilmay. Markay ROI-du ku guuldareysato, waxay dishaa ganacsigooda - maahan kaliya suuqgeynta.
Qaar ka mid ah ereyada kale waa la xusi karaa, laakiin weli sidaas uma xuma. Waxaan jecelahay erayga maaddooyinka fudud ee fudud often waxaan inta badan tixraacnaa misigraphics - infographics kuwaas oo si aad ah diirada loogu saaray gabal kaliya oo xog ah halkii sheekada oo dhan lagaheli lahaa. Waxyaabaha fudud ee cuntada fudud ayaa ka yara fiican oo tilmaamaya habdhaqanka sida loo wada baabba'ay. Soo jeedinta qiimaha iyo KPIs sidoo kale waxay noqon karaan ereyo buzz ah laakiin waa muhiim maadaama suuqleyda ay diirada saarayaan farriintooda ayna cabbirayaan natiijooyinka.
Tags: Ololaha 360suuq-galka agilexog weynriixidsuuq geynta macnaha guudcplcuratorhawlgelinta caadadiikasbadeen warbaahintahawlgelintaciyaarahajabsiga kobacafikirkawaayo-aragnimo immersiveinfographickpixayeysiis hooyop-ganacsigaROIshaashadda labaadbandhigidawaxyaabaha fududganacsiga bulshadakaliisku-daba-marintahogaamiyaha fikirkawadahadal laba dhinac ahqiimeeyn soo jeedinviral
Penguin 2.0: Afar Xaqiiqo oo ay tahay inaad ogaato
Jun 2, 2013 saacadu markay ahayd 8:03 AM
Jeclaw liistadaada, ereyadaas runtii aniga aqoon uma lihi, sidaa darteed waxaan u maleynayaa inay faa'iido badan leedahay inbadan la fahmo.
Jun 7, 2013 at 10: 05 PM
Liis aad u fiican oo madadaalo leh Doug. Inteena ugu badan ayaa dambi ka weyn inaan isticmaalno ugu yaraan in yar oo ka mid ah weedhahan. Noocani wuxuu i xasuusiyaa ciyaarta shirkadeed ee 90-kii ugu dambeeyay wac Buzzword Bingo. Kufiican wicitaanada iibka dheer ama shirarka shirkada oo dhan. Qaar baa laga yaabaa inay xasuustaan. Weli wuu iga xanaaqaa markaan ka fekero. Waan kugu raacsanahay adiga oo ku saabsan ROI inay tahay daruuri, laakiin waxaan qirayaa inaan eexasho 🙂